Ingabe kufanele ngithenge i-DoFollow backlinks, noma ngingazakhela mina?
O Yebo, ungathenga i-DoF elandelayo emuva kwe-blog yakho. Ngesikhathi esifanayo, ungase uziakhele ngokwakho. Ngisho ukuthi uzoba nomsebenzi ongcono ukuwafaka ngokomzimba kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi, kunokuba uthenge i-DoF elandelayo emuva kwe-backlink. Eqinisweni, ngaphandle kokuba nesethi ye-backlinks yekhwalithi, kungaba ngaphezulu komsebenzi onzima kakhulu ukulinganisa okuthunyelwe kwebhulogi yakho noma mhlawumbe noma yikuphi okushicilelwe kokuqukethwe kwekhasi lakho kwiwebhusayithi yokusesha. Asikho isidingo sokuthi uma ususha ku-SEO, kuzodingeka uthenge i-DoF elandelayo emuva kwe-backlink noma uqhubeke unzima ekukwakheni isixhumanisi. Ukuze unqobe lo mzabalazo, ngiphakamisa ukuhlola ezinye imithombo yewebhu engaxhunyiwe ukuze unikeze iwebhusayithi yakho yebhizinisi eliyinhloko noma ibhulogi nge-DoF elandelayo ye-organic quality ukuze uqalise.
Okuvame kakhulu, ukubuyiselwa emuva kwekhwalithi nge-DoFollow kungakusiza ngokuphakamisa izikhundla zokusesha iwebhusayithi yakho, ukuthuthukisa igunya lakho lesizinda kanye ne-Alexa rank (kulabo abanesithakazelo kule ndawo ekhethekile) , ukwandisa ithrafikhi yokusesha iwebhu, kanye ne-AdSense CPC (izindleko ngokuchofoza ngakunye). Ngaphandle nje kokuphelela, lawa amanye amagama ngezinye izikhathi asetshenziselwa ukunikeza incazelo kwi-backlinks - isixhumanisi esingenayo (inlink), citation, "incomo" noma isiteji esinamandla esinikezwe iGoogle mayelana nenani eliphakeme le website yonke, ngaleyo ndlela kubaluleka ukuphakanyiswa phezulu imiphumela imiphumela. Kungenxa yokuthi lawo mawebhusayithi ane-backlink amaningi angase akhiphe inani elengeziwe kubasesha abaphilayo abasebenzayo, futhi kufanele abe nokwamukelwa okungaphezulu kokukhomba okusheshayo yi-search yokukhwabanisa.
Ngakho, ekugcineni masibuyele emuva iphuzu - njengoba sinqume ukungathengi i-DoF ngemuva kwe-backlink bese upheka ezinye izinto ezinhle kakhulu. Kanjani? Yiqiniso, ukuthola i-DoFollow organic backlink akuyona into elula, kodwa empeleni, umsebenzi ungase ube yiphunga lekhekhe kalula - unikezwe ukuthi uyazi izintambo. Yingakho ngaphasi ngizokukhombisa amanye amacebo ukuthola ama-BackLink aphezulu aphezulu kakhulu ngaphandle kokukhokha i cent for that! Lapha kukhona:
Ngaphambi kwanoma yini enye, ngincoma ukuvakashela i-BlogAdda - konke okudingayo kukhona ukubhalisa i-akhawunti yakho entsha bese uhamba "esigabeni sami". Okulandelayo, khetha inketho "thumela ibhulogi yami" bese ugcwalisa yonke imininingwane edingekayo. Ngemuva kwakho konke, chofoza inkinobho ethi "ngenisa" futhi ujabulele i-BackLink esanda kudala ye-DoF. Yilokho kuphela!
Indawo yesibili engcono engizokukuveza yona i-Codecademy. Yiya kusayithi labo bese ufaka i-akhawunti yakho entsha ekubhaleni lapho. Uma usuqedile, vele uye kuphrofayela yakho siqu bese uyishumelela nge-website yakho esemqoka noma isixhumanisi sebhulogi. Yilokho - uzoba ne-backlink enhle kusuka ku-PR-7 nge-DoFollow.
Okulandelayo kulandela i-backlink evela ku-Granta. Njengoba nje ngishilo, hamba unayo i-akhawunti entsha kuwebhusayithi yayo, udlulise inqubo yokugcwalisa futhi ujabulele enye i-PR-7 DoFollow backlink
Ngemva kwakho konke, ungase futhi ulandele cishe isethi yezenzo ezifanayo ukuthola i-DoFollow backlink ikhwalithi kusuka kwenye yamawebhusayithi alandelayo. Zizwa ukhululekile ukuhlola izindawo ezinhle ezinhle ukuze uxhumane nazo, njenge-OneTab, i-Copyright, i-Alltop, Indulgy, i-Eventful, i-Ted. Ngaleyo ndlela, ungakhohlwa ukuvakashela i-akhawunti yakho ku-Google Plus, futhi uthumele okuthunyelwe kwakho kumarekhodi ukuthola enye i-backlink eyigugu ne-DoF Source .